Udo nke sitere na njem nleta nwere nzukọ ezin’ụlọ gị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Udo nke sitere na njem nleta nwere nzukọ ezin’ụlọ gị
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Akụkọ na -agbasa Australia • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ Maldives na -agbasa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Nzukọ ezinụlọ na-abụkarị nke onwe, mana ezinụlọ nke International Institute for Peace site na njem nlegharị anya na-eche na njem bụ ezinụlọ zuru ụwa ọnụ na ekwesịrị ịgụnye gị.
Ndị na-akwado ya, ndị otu Board na ndị na-eso ụzọ nke I.Institutelọ ọrụ mba ụwa maka udo site na njem nleta (IIPT) nzukọ zutere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu gara aga dị ka nzukọ "ezinụlọ zuru ụwa ọnụ" nke ndị Network Njem Nleta Ụwa na eTurboNews.
Louis D'Amore guzobere IIPT 34 afọ gara aga wee gosipụta nkwa ya ịnabata ogige ntụrụndụ 1000. Ugbu a, IIPT eguzobewo ogige ntụrụndụ udo na kọntinent ọ bụla belụsọ Antarctica
Nzukọ ezinụlọ ahụ nụrụ mmelite isi site na gburugburu ụwa gụnyere Jamaica, Australia, Iran, ma nabata isi ọhụrụ na Maldives.
Gee nti na podcast
Nzukọ ezinụlọ na-abụkarị nke nzuzo, mana ụlọ ọrụ IIPT kpebiri ime ka nzukọ nzukọ izu gara aga pụta n'ihu ọha. Udo site na njem nlegharị anya bụ Ezinụlọ zuru ụwa ọnụ nke ndị hụrụ udo n'anya nke ndị njem na njem nleta na ebe ọ bụla.
Ndị òtù ezinụlọ IIPT bịara gụnyere Dr. Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ oge abụọ nke UNWTO, Ajay Prakash, VP & President nke IIPT India, Kiran Yadov, VP na Co-guzobere IIPT India, Diana McIntyre, onye isi oche nke Isi nke Caribbean , Gail Parsonage, onye isi ala IIPT Australia, Fabio Carbone, onye nnọchi anya IIPT na Nnukwu na Onye isi ala IIPT Iran, Philippe Francois, onye isi oche nke World Association for Hospitality and Tourism Education & Training, Juergen Steinmetz, Onye guzobere World Tourism Network na CEO nke Travel News Group, Maga Ramasamy , President IIPT Indian Ocean Islands, Nwada Mmatsatsi, Onye isi ala IIPT South Africa, Bea Broda, onye na-eme ihe nkiri, Mohamed Raadih, IIPT Maldives Isi Onye isi ala, na ndị ọzọ.
A mụrụ International Institute for Peace site Tourism (IIPT) na 1986, Afọ Udo nke Mba Nile, nwere ọhụụ nke njem na njem nlegharị anya na-aghọ ụlọ ọrụ udo ụwa zuru ụwa ọnụ na nkwenye na ndị njem ọ bụla nwere ike ịbụ "Onye nnọchi anya Udo." Nzukọ IIPT nke Mbụ, Njegharị: A Dị Mkpa Maka Udo, Vancouver 1988, na ndị nnọchi anya 800 sitere na mba 68 bụ mgbanwe mgbanwe. N'oge ihe ka otutu njem bu 'njem ndi mmadu', Nzuko a bu uzo webatara echiche nke 'Sustainable Tourism' tinyere uzo ohuru maka "Ebumnuche Kacha Elu" nke njem nlegharị anya nke na-ekwusi ike na oke oru ndi njem na ikwalite njem na atụmatụ ndị njem na-enye aka na nghọta mba ụwa; imekọ ihe ọnụ n'etiti mba dị iche iche; gburugburu ebe obibi ka mma; mmelite omenaala na ichebe ihe nketa; mbelata ịda ogbenye; idozi na ịgwọ ọnya esemokwu; site na atumatu ndị a, na-enye aka iweta ụwa udo na adigide. IIPT esitela na-ahazi nzukọ 20 mba ụwa na nzukọ ụwa niile na mpaghara dị iche iche nke ụwa na-elekwasị anya na nchọpụta ọmụmụ nke gosipụtara ma kwalite ụkpụrụ ndị a nke njem.
Na 1990, IIPT rụrụ ọrụ nke njem na mbenata ịda ogbenye site na ịchọpụta ọrụ ndị nwere ike ime na mba anọ nke Caribbean na atọ na Central America. Mgbe UN Conference on Environment and Development (Rio Summit na 1992), IIPT mepụtara Usoro nke ụkpụrụ omume na ntuziaka maka njem nlegharị anya nke ụwa na 1993, duziri ọmụmụ mba ụwa nke mbụ na Koodu Omume na Omume Kacha Mma maka njem na gburugburu ebe obibi. IIPT 1994 Montreal Conference: “Iwulite Worldwa Na-adigide site na Njem Nleta” bụ ọgbakọ izizi mba ụwa nke mbụ na njem njigide na-adigide. Nzukọ a nyere aka na Bank World na-amalite nkwado ya maka ọrụ njem nlegharị anya iji belata ịda ogbenye na mba ndị na-emepe emepe. Agencieslọ ọrụ mmepe ndị ọzọ sochiri, ka ọ na-erule n'afọ 2000, ọrụ ndị njem mere na mbelata ịda ogbenye ghọrọ ihe a maara ebe niile.
Nkwupụta Amman sitere na Summit Global Summit na Amman, Jordan 2000 nakweere dị ka akwụkwọ gọọmentị nke United Nations. N'otu aka ahụ, Nkwupụta Lusaka na Sustainable Tourism Development, Change Climate na Udo, sitere na IIPT Fifth Africa Conference, 2011, UNWTO nakweere ma kesaa n'ụzọ sara mbara. Nzukọ a rụpụtara akwụkwọ e bipụtara: Meetng ihe ịma aka nke mgbanwe ihu igwe na njem nlegharị anya ma bụrụkwa ezigbo ihe na UNWTO 20 General Assembly nke Zambia na Zimbabwe na-akwado. IIPT Global Symposium, 2015 na Johannesburg, South Africa kwanyeere ihe nketa nke Nelson Mandela, Mahatma Gandhi na Martin Luther King, Jr. IIPT gosipụtarala ihe ọ bụla kwa afọ kemgbe 1999 na World Travel Market, London - afọ anọ gara aga na ITB , Berlin na ọtụtụ manor Isi nzukọ na ihe omume na Caribbean, Australia, India, Jordan, Malaysia na Iran.
Na 1992, dị ka akụkụ nke emume iri abụọ na ise nke Canada na-echeta ụbọchị ncheta ọmụmụ nke afọ 125 nke Canada dị ka otu mba, IIPT tụụrụ ime ma mejuputa “ogige Udo na Canada dum.” Obodo na obodo 125 sitere na St John, Newfoundland gafee oge ise oge na Victoria, British Columbia, raara ogige maka udo na October 350 ka a na-ekpughere Ncheta Nchedo nke mba ahụ na Ottawa na 8 Peace Peace na-agafe na nyocha. N'ime ihe karịrị ọrụ 5,000 Canada25,000, Peace Parks gafee Canada ka a sịrị na ọ "kacha dị mkpa." Kemgbe ahụ, a raara ogige ntụrụndụ mba ụwa IIPT nye ihe nketa nke nzukọ mba ụwa IIPT na nzukọ ụwa niile. Pụrụ Iche IIPT International Peace Parks dị na Bethany n'ofe Jọdan, ebe a na-eme Kraịst baptism; Victoria Falls, otu n’ime ihe ịtụnanya asaa sitere n’ụwa; Ndola, Zambia, saịtị nke odeakwụkwọ ukwu nke UN Dag Hammarskjold dara mgbe ọ na-aga ọrụ udo na Congo; DMedellin, Colombia, raara nye na emepe ụbọchị UNWTO 125st General Assembly; Ogige Ntụrụndụ Sun River, China; na Uganda Martyr nke Katọlik Katọlik, Zambia.
More na nleta IIPT www.iipt.org More na nleta WTN: www.wtn.travel
Udo site na otu ndi njem nlegharị anya n'ime World Tourism Network: https://rebuilding.travel/peace/